सरकार मोडालिटीमै अलमलियो, जनतालाई सास्ती — janadristi
सरकार मोडालिटीमै अलमलियो, जनतालाई सास्ती
२७ जेठ २०७७, मंगलवार ०६:१०
२७ जेठ, काठमाडौं । लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा सरकार अलमलिँदा सर्वसाधारणहरुले भने सास्ती पाएका छन् । सरकारले १८ जेठयता लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गर्दै आएको छ ।
लकडाउन ३२ जेठसम्म तोकिए पनि त्यसभन्दा अगाडि नै मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी थियो । लकडाउन लम्बिदै गएपछि व्यापारीहरुले पसलहरु भने खुला गरेका थिए । साना उद्योगी–व्यापारीहरुको छाता संस्था नेपाल राष्ट्रिय व्यावसायी महासंघले २१ जेठमा निर्णय गराएर २२ जेठदेखि पसल खुला गराउन शुरु गरेका थिए ।
व्यापारीहरुले एकतर्फी निर्णय गरेर पसलहरु खुला गरेपछि सरकारले उनीहरुलाई वार्तामा बोलाएको थियो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल र महासंघबीच भएको वार्तामा पनि पसल खुलाउन अवरोध नगर्ने निर्णय भएको महासंघ अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन् ।
त्यसयता काठमाडौंको न्यूरोड, महाबौद्ध, भोटेबहाल, कोटेश्वर, जोरपाटी लगायतका क्षेत्रमा निर्वाध रुपमा पसलहरु सञ्चालन भइरहेका थिए । मंगलबार भने न्यूरोड क्षेत्रमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर पसलहरु बन्द गराएको छ । नियमित झै पसलहरु खुला गर्न विहानै न्यूरोड पुगेका व्यापारीहरुलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेर पसलहरु बन्द गराएको हो ।
महासंघ अध्यक्ष कटुवालले प्रहरीले एक्कासी आएर बन्द गराएको बताए । पूर्वसूचना विनै प्रहरी गएर व्यापारीहरुलाई धम्काउँदै पसलहरु बन्द गर्न दवाव दिएको उनले बताए । पसल बन्द गराउने विषयलाई लिएर प्रहरी र व्यापारीबीच केहिबेर घम्साघम्सी समेत भएको छ ।
ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालित भएपछि व्यापारीहरु पसल बन्द गर्न बाध्य भए । अध्यक्ष कटुवालले बन्द गराउने भए सरकारले पूर्वजानकारी दिनु पर्ने बताए । बिना जानकारी व्यापारीहरुलाई धम्काएर जर्वजस्त बन्द गराउनु निन्दनीय भएको उनले बताए ।
‘सीडीयो सापसँग भएको वार्तामा पनि हामीलाई बन्द गराउनु भनिएन, सीडीयोसँग सकारात्मक कुरा भएपछि व्यापारीहरुले पसल खुला राखेका हुन्,’ अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘आज विहान एक्कासी गएर डाङ्डाङ्–डुङ्डुङ् पार्नु हुने थिएन ।’
सरकराले स्पष्ट मोडालिटी नबनाएका कारण समस्या भएको उनले बताए । व्यापारीहरुलाई घरभाडा, बैंकको ब्याजदर र सरकारलाई नै तिर्नु पर्ने करका कारण धेरै तनाव भएको उनले बताए । सरकारले के गर्दा, कसलाई के असर पर्छ भन्ने किसिमले पनि नसोचेको उनले बताए । अझै सरकारले कुनै सहुसलियतका प्याकेज नल्याउने र व्यापारीलाई पनि जर्बजस्त पसल बन्द गराउन दवाव दिँदै हिँड्ने नीति ठिक नभएको उनले बताए ।
खै स्पष्ट नीति ?
सरकार मोडालिटीमै अलमलिदा व्यापारीमात्रै होइन सर्वसाधारणहरुले पनि उस्तै सास्ती पाएका छन् । ७५ दिन लामो लकडाउनपछि काम विशेषले हिँडेका सर्वसाधारणहरुलाई प्रहरीले बाटोमै रोकिदिने गरेको छ ।
प्रहरीले बाटोमा हिँडेका निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरु, बैंकका कर्मचारीहरु तथा आम सर्वसाधारणलाई रोकिदिने गरेको हो । प्रहरीले सवारीसाधन लिएर हिँड्ने सबैलाई होल्ड गर्ने नीति लिएको छ ।
मंगलबारमात्रै करिब २ हजार मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बताएको छ । काठमाडौंको गौशाला बस्ने हरि श्रेष्ठ मंगलबार विहान स्कुटर लिएर क्षेत्रपाटी जाँदै थिए । उनलाई प्रहरीले ठमेलमा रोकिदियो ।
निर्माण कम्पनीमा जागिर खाने उनी काममै हिँड्दा पनि प्रहरीले तनाब दिएको बताउँछन् । ‘डोजरमा लाग्ने एउटा सामान बाहिर पठाउनु पर्नेछ, अहिले म त्यहिँ लिन हिँडेको’ उनी भन्छन्, ‘क्षेत्रपाटी पुग्नु पर्ने प्रहरीले यहिँ रोकेर राखिदिएको छ ।’
हरि जस्ता दुई दर्जन व्यक्तिलाई प्रहरीले सो ठाउँमा रोकिदिएको छ । भद्रकालीमा त अझ एक सयभन्दा धेरै मोटरसाइकल र ४ वटा ट्याक्सीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बबरमहलमै पनि ९ वटा मोटरसाइकल रोकिदिएको छ ।
‘यो त प्रहरीको दादागिरी नै भयो, काम पर्दा पनि निस्कन नदिने,’ भद्रकाली चोकमा भेटिएकी एक महिला जंगिइन्, ‘कति दिनसम्म थुनेर राख्न चाहेको हो सरकारले ?’
‘सरकारले मोडालिटी चेन्ज गर्छु भनेर किन गर्दैन ? अफिस खुल्यो, जाँदाखेरी प्रहरीले रोकिदिन्छ,’ अर्का युवक भन्छन् ।
भीडमा एक जना व्यापारी पनि रहेछन् । उनी सोह्रखुट्टै आफ्नो पसलमा हिँडेका थिए । तर प्रहरीले उनलाई भद्रकालीमै रोकिदियो । ‘पसल खुला गर्दा अवरोध नहुने भन्ने समाचार पढेँ, साथीहरु सबैले पसल खुला राखेका छन्,’ ती व्यापारी भन्छन्, ‘पसल खोल्न हिँडेको बाइक राखिदिएर हिँड्दै जानू भन्छ प्रहरीले ।’ प्रहरीले साँझ ७ बजे बाइक लिन आउन भनेको उनले सुनाए ।
उनले केहीबेर प्रहरीलाई आग्रह गर्ने सोचमा रहेको उनले बताए । नभए हिँडेरै भए पनि जाने उनले बताए । पसल नखोलेको ३ महिना हुन लागिसक्यो, सामानहरु मुसाले खाइसक्यो होला,’ उनले भने, ‘एकपटक फेरि प्रहरीसँग अनुरोध गर्छु, मानेन भने हिँडेरै भए पनि जानु पर्ला ।’
यिनीहरु प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । सरकार मोडालिटीमा अलमलिँदा काठमाडौंका चोकचोकमा यसरी नै सर्वसाधारणहरुले सास्ती खेपिरहेका छन् ।
Posted in देश, प्रदेश खबर, बागमती प्रदेश, समाचार